अपडेट: गीता नेपाली हत्याकाण्डका अभियुक्त पक्राउ, सोधपुछका लागि पुलका ठेकदार पनि तानिए ! | ebaglung.com
अपडेट: गीता नेपाली हत्याकाण्डका अभियुक्त पक्राउ, सोधपुछका लागि पुलका ठेकदार पनि तानिए !
२०७४ असार २७, मंगलवार २०:२३	थप समाचार 4009 पटक हेरिएको !
कमल पौडेल, खर्वाङ २०७४ असार २७ । गुल्मी अमराईकी गिता हत्या काण्डका अभियुक्तलाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बडीगाड गाउँपालिकाका २ सक्नेरका वर्ष २० का हिराबहादुर मगरलाई खर्वाङ प्रहरी चौकीले नियन्त्रणमा लिएर केहि समय अघि हरिचौर इलाका प्रहरी कार्यालय पठाएको श्रोतले बतायो ।
तस्वीरको बायाँ चिया छोपिएको गिलास समातेकी मृतक गिता नेपालीकी भाउजू सीता नेपाली हुन् ।
खर्वाङबाट प्रनानि भोजबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले अभियुक्त मगरलाई निजको घरबाटै पक्राउ गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । प्रहरी निजको घरमा पुगेपछी उनका बाबुले चार पाँच दिन देखी छोरालाई घरमा नदेखेको बताएपछी घरखानतलासी गर्न लाग्दा अभियुक्त मगर भाग्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको स्थानीयले बताए ।
घटनाका दिन अभियुक्त मगर, मृतक गीता नेपाली र उनकी भाउजु सीता नेपाली राति ८ बजे सम्म साथै बसेर मदिरा वियर सेवन गरेको खुल्न आएको छ । पहिले भाउजू सीताले कुनै केटाको फोन आएपछी मृतक गितालाई त्यहिँ छोडी भोलि भेट भैहाल्छ नि भनेर एक्लै घरमा गएको बताएकी थिईन । अहिले तीनै जना साथै बसेर राति ८ बजेसम्म मदिरा सेवन गरेको भन्ने जानकारी बाहिर आएपछी घटना रहस्यमय बनेको स्थानीयको बुझाई छ ।
मृतक गीताको हत्या गरिएको भन्नेमा कसैमा शंका नरहेपनि हत्या गर्नु भित्रको रहस्य अभैm बाहिर आएको छैन । हत्याकाण्डमा को कसको संलग्नता थियो के कारणले हत्या गरियो भन्ने प्रहरीले गम्भीररुपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।
प्रहरीले सोधपुछका लागि लब्दीखोला मोटरेबल पुलका ठेकेदारलाई हरिचौर इलाका प्रहरी कार्यालयमा पठाएको श्रोतले बतायो ।
अहिले मृतक गीता नेपालीका श्रीमान धनबहादुर नेपाली, बुबा, भाउजू सीता नेपाली सहितका समूह हरिचौरमा रहेको छ भने मृतकको शवको पोष्टमार्टम भोलि गरिने बताईएको छ ।
पहिरोले सडक अवरुद्ध हुदा यात्रुहरु मर्कामा